मंगल ग्रहको उपग्रहमा नेपालीले बनाए वासस्थल !
ARCHIVE, NEWSPAPER » मंगल ग्रहको उपग्रहमा नेपालीले बनाए वासस्थल !
काठमाडौं । मंगलग्रहको उपग्रह ‘फोबोस’मा अन्तरिक्षयात्री बस्न सक्ने वासस्थानको नमूना तयार गर्न अन्डरग्य्राजुएट तहका इन्जिनियररिङबीच संसारभर गराइएको प्रतिष्पर्धामा नेपाली विद्यार्थीको समूह विजेता तीनमा छनोट भएको छ ।
समूहमा थापाथली इन्जिनियरिङ क्याम्पसकाम राजन भण्डारी र सञ्जीव अधिकारी एवं पुल्चोक क्याम्पसका राजकुमार गुरुङ र अर्जुन मगर सम्मिलित छन् । प्रतियोगितामा सहभागी हुने नेपाली विद्यार्थीको समूहले ६ वटा नमुना सिलिन्डर आकारका नमूनाको डिजाइन तयार गरेको आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।